ओली–नेतृत्वमा चुनावमा जानै सकिन्न- विचार - कान्तिपुर समाचार
ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुनै सक्दैन र भए पनि त्यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन । उहाँमा सत्ता कब्जाबाहेक अर्को सोच छैन ।
कांग्रेस नेतृत्व कमजोर बनिदिनाले ओलीलाई यो अवस्थामा पुग्न सहज भएको हो । कांग्रेसले आरम्भदेखि नै साँच्चै प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको र सरकारबाट पाउने कुनै पनि पदको आशा नगरेको भए ओलीको स्वेच्छाचारिता यसरी बढ्ने थिएन ।
जेष्ठ ३०, २०७८ शेखर कोइराला
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु केही महिनाअघि दिनुभएको एउटा अन्तर्वार्ता अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भैरहेको छ । तत्कालीन सरकार सत्ता कब्जा गर्ने बाटामा लागेको आरोप लगाउँदै उहाँले त्यो कसरी भयो भन्नेबारे व्याख्या गर्नुभएको थियो । त्यति बेलाको धारणा यतिखेर उहाँकै कार्यशैलीसँग मिल्दोजुल्दो भएर ‘ट्रोल/भाइरल’ भएको हो ।
‘राज्यका सबै अंगलाई जब कार्यकारिणीले वशीभूत गर्छ, त्रसित बनाउँछ र नियन्त्रणमा लिन्छ अनि नियन्त्रण–सन्तुलन गुम्छ, राज्यका सबै अंग कार्यकारिणी अर्थात् सरकारका रबरस्ट्याम्पजस्ता बन्छन्, तब तानाशाही हुन्छ,’ ओलीले उक्त अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, ‘नत्र त तानाशाहीलाई अदालतले हटाइदिन्छ, अर्कोले हटाइदिन्छ । कुन–कुनले मान्दैन, उसको स्वतन्त्र भूमिका हुन्छ । धाँधली गर्न निर्वाचन आयोगले दिँदैन । भ्रष्टाचार गर्न अख्तियारले दिँदैन । तर, यी सबैलाई नियन्त्रणमा लिँदै निरीह बनाइसकेपछि कार्यकारिणी स्वेच्छाचारी हुन्छ । त्यो भनेको तानाशाही ।’
उहाँ दोस्रो पटक सत्तामा आउनुअघिको उपर्युक्त भनाइ आम नागरिकसम्म पुगेको छ, भलै यो धारणा उहाँले भरतपुर नगरपालिकामा मतपत्र च्यातिँदाको सन्दर्भसँग जोड्दै व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँको अहिलेको क्रियाकलाप त्यही भनाइवरिपरि घुमेको छ र उहाँ त्यसमै दृढ भएझैं देखिनुहुन्छ । अर्कालाई भन्ने तर आफू त्यही गर्ने !
संवैधानिक अंगहरूमा आफ्ना औजार
संवैधानिक अंगलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रमा परिणत गरी पंगु बनाउने काम भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सहमतिबिना, संसद् र संसदीय सुनुवाइ छलेर अध्यादेशमार्फत ओलीले विभिन्न संवैधानिक अंगमा आफ्ना विश्वासिला पात्रहरू पुर्‍याइसक्नुभएको छ । त्यस्ता नियुक्तिलाई के भन्ने ? चकलेट बाँडेको शैलीमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त र राजदूत पदको वितरण गरिएको छ । त्यस्ता नियुक्ति पाउने प्रायःको योग्यताको परीक्षणसम्म भएको छैन । ओलीले सत्ता कब्जाको शैलीमै मुलुकलाई अघि बढाइरहनुभएको छ । आफूअनुकूल हुने अनेक उटपट्याङ विधेयक लैजाने र आम नागरिकसम्बन्धी एउटा विधेयक देखाएर ती सबैलाई पारित गराउन पहल गर्ने गरेको खुलेकै छ । अनि बाहिर त्यही नागरिकसम्बन्धी विधेयक देखाउँदै यस्ता विधेयक रोक्ने काम गरियो भन्दै आमजनका आँखामा छारो हाल्ने काममा समेत प्रधानमन्त्री उद्यत हुनुले मुलुक कता जाँदै छ भन्ने झल्किन्छ ।
प्रधानन्त्री भएलगत्तै ओलीले राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, गैरसरकारी निकायको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउनुभयो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने र सञ्चारकर्मीहरूलाई धम्क्याउने–तर्साउने काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको हरेक गतिविधि हेर्दा उहाँ स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढिरहनुभएको स्पष्ट देखिन्छ । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्यले प्रधानमन्त्रीको नियत स्पष्ट पारेको छ ।
२०७४ कात्तिक १७ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन बन्यो । गठबन्धनले सातमध्ये छ प्रदेशमा दुईतिहाइ र संघीय संसद्मा ६४ प्रतिशत जनमत पायो । २०७४ फागुन ३ मा ओली सत्तामा आएपछि पूर्वएमाले अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई समृद्धिको बाटामा अगाडि बढाएर इतिहास रच्ने स्वर्ण अवसर पाउनुभएको थियो । तर उहाँले त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुभएन । उहाँ आफ्नो उपचारमा केन्द्रित रहनुभएको भन्दै पहिलो एक वर्षलाई खासै ध्यान दिइएन । पछिल्ला वर्षहरू पनि घुमफिरमै केन्द्रित रहे ।
चुनावकै लागि ओलीले आफैंले निकै आलोचना गर्दै आएको माओवादी केन्द्रसँग मोर्चा कस्नुभएको थियो । अनि, पुष्पकमल दाहालसँगको सहकार्य र सम्झौता ओली आफैंले भंग गर्नुभएको पनि स्पष्ट छ । चुनाव जित्नु थियो र उहाँले माओवादी केन्द्रलाई आफूमा गाभ्नुभयो । तर पुष्पकमल दाहाललाई नेतृत्व हस्तान्तरणको समय हुनै लाग्दा उहाँले बखेडा झिक्नुभयो । ओलीले अरूलाई नेतृत्व दिने चाहनाका साथ इमानदारीपूर्वक पार्टी एकता गर्नुभएकै थिएन । कुण्ठाको घैलो भरिएको मानिस शक्तिमा पुगेपछि अरूलाई होचा, फुस्रा, भद्दा अनेकन् स्वरूपमा देख्दै काम नलाग्ने भन्न पछि पर्दैन । ओलीमा त्यही प्रवृत्ति देखियो ।
त्यसैका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको नेकपा औपचारिक रूपमा फुटको संघारमा थियो । तर अदालतले पार्टीको नामको विवाद निरूपण गर्ने क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो । त्यसपछि ओलीलाई झनै सहज भयो । माओवादी केन्द्रका केही नेता ओलीतर्फ लागे । तर एमालेका शक्तिशाली र पूर्वप्रमुख सबैजसो नेता माधव नेपालतर्फ लागे । अझ रमाइलो त के भने, ओलीले सुरुदेखि नै माधव नेपालदेखि पुष्पकमल दाहालसम्मलाई केवल सत्ता र शक्तिका लागि मात्रै उपयोग गरिरहनुभएको थियो तर समय छँदै यसको भेउ कसैले पाउन सकेन ।
सम्मानित राष्ट्रपतिको कार्यालय जुन दिनदेखि दलविशेषको गुट र प्रधानमन्त्रीको तालमा हिँड्न सुरु गर्‍यो, त्यही दिनदेखि संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतराको घण्टी बज्न थाल्यो । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाटै पटकपटक संविधान कुल्चने र च्यात्ने काम भयो । राष्ट्रपति आफैंले सम्मानित संस्थाको गरिमा र मर्यादालाई कायम राख्न सक्नुभएन । हरेक राजनीतिक उतारचढावमा राष्ट्रपति दलविशेषको एउटा कित्तामा उभिन पुग्नुभयो । हामी देशको राष्ट्रपति भन्दै गयौं तर उहाँ कहिल्यै दल र गुटभन्दा माथि उठ्नै सक्नुभएन । राष्ट्रपति कार्यालय सधैं सरकारको रबरस्टाम्प बन्यो, जसका कारण राष्ट्रपतिको संस्था विवादमा तानिँदै र बदनाम हुँदै गयो । अहिलेजस्तो भद्दा मजाकझैं मन्त्रीहरू नियुक्त गरिएको छ, यसबाट संविधान कुल्चने र संघीयताको खिल्ली उडाउने काम भएको छ ।
पटक–पटक संसद् विघटन
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ को बिहानै संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् नै विघटन गरिदिनुभयो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर पनि गरिदिइहाल्नुभयो । संसद्को कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहँदै गरिएको विघटन र संवैधानिक परिषद् नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध नेकपाकै दाहाल–माधव समूह एवं विपक्षीहरू नेपाली कांग्रेस, जसपा लगायतका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसाकर्मीहरू आन्दोलित भएपछि अदालतले त्यसलाई बदर गरिदियो । त्यसपछि दलसम्बन्धी निर्णय गर्दा नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिएर अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई छुट्याइदियो, जसले गर्दा ओलीलाई सीधै फाइदा र बल दुवै मिल्यो । त्यसपछि ओलीबाट अनेकन् खेल र जालझेल सुरु भए । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस बाहिर विरोधमा बोले पनि भित्र ओलीकै समर्थनमा झैं देखिन थाल्दा समस्या बल्झेर गयो ।
संसद्मा विश्वासको मत पुग्न सकेन । त्यसपछि धारा ७६(३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले दोस्रोचोटि जेठ ७ गते मध्यरातमा संसद् विघटन गराइदिनुभयो । यो गैरसंवैधानिक र गैरराजनीति छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सबैको नजर यति बेला अदालततिर छ । विद्वान् अधिवक्ताहरू बहसमा हुनुहुन्छ । हुन त यसअघि संवैधानिक निकायमा गरिएका सिफारिसहरू असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा रहँदारहँदै पनि नियुक्ति गरिछाडिएको दृष्टान्त हामीसामु छ । संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस गरिएकाहरूलाई संसदीय सुनुवाइ नै नगरी राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएको थियो । न्यायालय आस्था र विश्वासको अन्तिम धरोहर हो । त्यसकारण न्यायालय संविधानबाहिर जान सक्दैन, जाँदैन र उसले आफ्नो विवेक गुमाउँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
संख्याका आधारमा त नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा कमजोर प्रतिपक्ष थियो नै, त्योभन्दा पनि नेतृत्वले सत्तारूढ दलसँग गरेको साँठगाँठले झनै कमजोर बनायो । आफन्तलाई पद दिलाउन र टिकाउन मात्र नभएर अनेकन् बहानामा कांग्रेस नेतृत्व कमजोर बनिदिनाले ओलीलाई यो अवस्थामा पुग्न सहज भएको हो । कांग्रेसले आरम्भदेखि नै साँच्चै प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको र सरकारबाट पाउने कुनै पनि पदको आशा नगरेको भए ओलीको स्वेच्छाचारिता यसरी बढ्ने थिएन । कतै न कतै ओली यो तहसम्म पुग्नुमा कांग्रेस नेतृत्वको भूमिका पनि देखिन्छ । प्रतिपक्ष सम्मानित बन्ने हो भने सत्ताले जे गरे पनि समर्थन गर्ने होइन ।
पुस ५ को संसद् विघटन अदालतले बदर गरेपछि राजनीति गिजोलिँदासम्म पनि प्रमुख प्रतिपक्ष कतै ‘सिन’ मा आएन । उल्टै भागबन्डा खोजेर बस्यो । यो बुझेरै ओली कांग्रेस नेतृत्वलाई केही पद दिएर आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढिरहनुभयो । सबैजसो काममा कांग्रेस नेतृत्वको समर्थन हुँदै गयो र प्रधानमन्त्री उत्साहित हुँदै जानुभयो । उहाँको स्पष्ट लक्ष्य थियो— प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आफैंले राज गरिरहने । तर, कांग्रेस नेतृत्वले अझै पनि यो कुरा बुझ्न सकेको छैन । अदालतको निर्णय केकस्तो आउँछ भन्नुभन्दा पनि ठीक–बेठीक के हो, प्रमुख प्रतिपक्षले यसलाई कडा प्रतिवाद गर्न आवश्यक थियो/छ । तर त्यस्तो प्रयासै भएन, हामीले जति भन्दा पनि सभापति हलचल गर्नुभएन ।
ओलीको नेतृत्वमा चुनाव असम्भव
प्रधानमन्त्री ओली आफूले पाएको मतको सदुपयोग गर्न नसक्ने व्यक्तिमा दर्ज भइसक्नुभएको छ । बलियो जनमत पाए पनि तीन वर्षमा लथालिंग पारा देखिसकिएकाले उहाँको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ भन्नु मुर्ख्याइँबाहेक केही होइन । उहाँको नेतृत्वमा चुनाव हुनै सक्दैन, कथं भए पनि त्यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन । उहाँमा सत्ता कब्जाबाहेक अर्को सोच नै छैन ।
यति बेला उहाँ अनेक बहानामा न्यायालयलाई पनि प्रभावमा राख्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । अदालतले यसपालि पनि संसद् पुनःस्थापना गरिदिए अब हुने बहस चुनावकै हो । तर, चुनाव हुने सम्भावना देखिन्न । संविधान जारी हुँदा त्यसको पक्ष–विपक्षमा, दुई किनारामा उभिएका शक्तिहरू — ओली र ठाकुर–महतो समूह — को स्वार्थप्रेरित गठबन्धन सरकार बन्नु भनेकै आउने चुनाव नहुनु हो । झन्डै दुईतिहाइ मत पाउँदा पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्ने ओलीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव गर्नुहोला भनेर सोच्नै सकिन्न । संविधान जारी गर्ने, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विश्वासिलो, भरोसायोग्य र परिपक्व राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनावमा जाँदा मात्रै देशले निकास पाउँछ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ ०८:१०